China Chinese mutengesi we1050 1060 1070 1100 aluminium sheet coil vagadziri uye vanotengesa | Huifeng
Chinese mutengesi we1050 1060 1070 1100 aluminium sheet coil
6063, 6082, 7075 nezvimwe
Mill pedza, nekusimbisa, nebefu, anodized, ruvara unhani, makorari
Aluminium coils anoshandiswa zvakanyanya mumagetsi, kurongedza, kuvaka, michina, nezvimwe.
Aluminium coil kupatsanura
1000 dzakateedzana aruminiyamu ndiro uye coils
Iyo aluminium sheet inomiririra iyo 1000 nhevedzano inonziwo yakachena aluminium sheet. Pakati pezvose zvakateedzana, iwo 1000 akateedzana ndeeye akateedzana ane aruminiyamu zvirimo. Rucheno runogona kusvika kupfuura 99,00%. Nekuti haina zvimwe zvigadzirwa zvehunyanzvi, maitiro ekugadzira ari nyore uye mutengo wacho wakachipa. Parizvino ndiyo yakanyanya kushandiswa dzakateerana mumaindasitiri akajairwa. Mazhinji ezvigadzirwa zvinotenderera mumusika ari 1050 uye 1060 akateedzana. Iyo 1000 yakateedzana aruminiyamu ndiro inosarudzira hushoma aruminiyamu yezvinhu izvi zvakateedzana maererano nemaviri ekupedzisira manhamba echiArabic. Semuenzaniso, ekupedzisira maviri manhamba echiArabic e1050 akateedzana ari makumi mashanu. Zvinoenderana neyepasi rose zita rekutumidza zita, iyo aruminiyamu yezvinyorwa inofanirwa kusvika 99.5% kana kupfuura kuti ive chigadzirwa chakakodzera. nyika yangu yealuminium alloy technical tekinoroji (gB / T3880-2006) zvakare inotsanangura zvakajeka kuti aruminiyamu yezvinhu 1050 inosvika 99.5%. Saizvozvo, iyo aruminiyamu yezvinyorwa zve1060 akateedzana aruminiyamu mahwendefa anofanirwa kusvika 99.6% kana kupfuura
2000 akateedzana aruminiyamu ndiro uye coils
Mumiriri 2A16 (LY16) 2A06 (LY6) 2000 akateedzana aruminiyamu mahwendefa anozivikanwa neakanyanya kuomarara, ayo emhangura element zvemukati iri yepamusoro, ingangoita 3-5%. 2000 akateedzana aruminiyamu mahwendefa ari avhiyesheni aruminiyamu zvinhu, izvo zvisingawanzo kushandiswa mune zvakajairika maindasitiri.
3000 akateedzana aruminiyamu ndiro uye coils
Kunyanya pachinzvimbo che 3003 3003 3A21. Inogona zvakare kunzi anti-ngura aluminium ndiro. yangu nyika 3000 akateedzana aruminiyamu ndiro yekugadzira tekinoroji iri yakanaka. Iyo 3000 yakateedzana aruminiyamu ndiro yakagadzirwa nemanganese sechinhu chikuru. Izvo zvirimo zviri pakati pe1-1-1.5. Iwo akateedzana ane zvirinani anti-ngura basa. Iyo inowanzo shandiswa munzvimbo dzakanyorovera senge mhepo mhepo, mafiriji, uye undercars. Mutengo wacho wakakwirira kupfuura iwo we1000 akateedzana. Iyo inowanzo shandiswa chiwanikwa alloy akateedzana.
4000 dzakateedzana aruminiyamu ndiro uye coils
Iyo aruminiyamu ndiro inomiririrwa ne4A01 4000 nhepfenyuro ndeyakateedzana neakakwira silicon zvemukati. Kazhinji zvinyorwa zvesilicon zviri pakati pe4,5-6.0%. Ndezvezvekuvakisa zvinhus, zvemuchina zvikamu, zvekuchengetedza zvinhu, zvinhu zvekusimbisa; yakaderera kunyauka poindi, yakanaka ngura kuramba Chigadzirwa tsananguro: Iyo ine hunhu hwekupisa kupisa uye kupfeka kuramba
Inomiririra iyo 5052.5005.5083.5A05 akateedzana. Iyo 5000 yakateedzana aruminiyamu ndiro ndeyayo inowanzo shandiswa chiwanikwa chiwanikwa aluminium ndiro dzakateedzana, chikuru chinhu ndeye magnesium, uye iyo magnesium yezvinyorwa iri pakati pe 3-5%. Inogona zvakare kunzi aluminium-magnesium alloy. Iwo makuru maficha akaderera kuwanda, yakasimba tensile simba uye yakakwirira kukwirisa. Munzvimbo imwe chete, huremu hwealuminium-magnesium alloy yakaderera pane mamwe akateedzana. Naizvozvo, inowanzo shandiswa mukubhururuka, senge matangi emafuta erendege. Inoshandiswawo zvakanyanya mumaindasitiri akajairwa. Iyo yekugadzirisa tekinoroji inoenderera ichikanda uye kupumburuka, inova yeinopisa-yakakungurutswa aruminiyamu ndiro dzakateedzana, saka inogona kushandiswa pakadzika oxidation kugadzira. Munyika yangu, iyo 5000 akateedzana aruminiyamu ndiro ndeimwe yeakakura aruminiyamu ndiro dzakateedzana
6000 akateedzana aruminiyamu pepa uye coil
Mumiririri 6061 inowanzo iine zvinhu zviviri zvemagesium uye nesilicon, saka inotarisisa zvakanakira 4000 dzakateedzana uye 5000 dzakateedzana 6061 inogadzirwa neacuminium inotonhorera inogadzirwa, inokodzera kunyorera ine yakanyanya kudikanwa yekudzivirira ngura uye oxidation. Kushanda kwakanaka, kwakanakisa chimiro chinoratidzira, kupfeka kuri nyore, uye kugadzikana kwakanaka. Inogona kushandiswa pane yakaderera-kumanikidza zvombo uye nendege majoini.
Hunhu hwese hwe6061: yakanakisa interface maficha, yakapfava kupfeka, yakasimba simba, kugona kushanda, uye yakasimba ngura kuramba.
Chaiwo mashandisiro e6061 aluminium: zvikamu zvendege, zvikamu zvemakamera, couplers, marine accessories uye Hardware, zvemagetsi zvishandiso uye majoini, zvekushongedza kana zvakasiyana siyana Hardware, hinge misoro, magineti misoro, brake pistons, hydraulic pistons, magetsi zvishongedzo, mavhavha uye mavhavhosi zvikamu.
7000 akateedzana aruminiyamu pepa uye coil
Mumiriri 7075 kunyanya ine zinc. Izvo zvakare ndeyenzvimbo yekuvhiya nhevedzano. Iyo aruminiyamu-magnesium-zinc-mhangura chiwanikwa, inopisa-inorapika chiwanikwa, uye yakasimba yakaoma aluminium alloy ine yakanaka yekupfeka kuramba. Iyo 7075 aluminium ndiro ine kushushikana-kurerukirwa uye haizomboremara kana kumonyaniswa mushure mekugadziriswa. All super super Iwo ese akasimba 7075 aruminiyamu mahwendefa ari ultrasonically akaonekwa, ayo anogona kuona pasina mablister uye tsvina. Iwo 7075 aruminiyamu mahwendefa ane akanyanya kudziya maficha, ayo anogona kupfupisa iyo yekuumba nguva uye kugadzirisa basa kugona. Chinhu chikuru ndechekuti kuomarara kwe7075 kwakanyanya kuomarara, yakasimba-simbi yealuminium alloy, iyo inowanzoshandiswa mukugadzira zvivakwa zveendege neramangwana. Zvinoda kugadzirwa kwepamusoro-kushushikana kwechimiro zvikamu uye mafuru ane simba rakakwira uye yakasimba corrosion kuramba.
8000 akateedzana aruminiyamu pepa uye coil
Iyo inowanzo shandiswa ndeye 8011, iri yemamwe akateedzana. Mukurangarira kwangu, ndiro yealuminium ine basa guru kugadzira macaps emabhodhoro anoshandiswa zvakare muma radiator, mazhinji acho ari aluminium foil. Kwete inowanzo shandiswa.
"Jinan Huifeng aruminiyamu Co, LTD". Iri richangobva kusimbiswa aluminium kugadzira kugadzirwa bhizinesi, rakagadziriswa kubva kuhurumende-inomhanya bhizinesi, iri muChina's "rose town" - PingYin County yeJinan guta renharaunda, inovhara nzvimbo inopfuura mazana matanhatu maeka.
Iyo hombe yekushandisa michina inosanganisira yekunyungudika uye yekurasa michina, imwechete muchina furemu yakapetwa inodzora inopisa kupisa rolling chigayo, inotonhora inotenderera chigayo, cast-rolling muchina, crosscut inobhururuka shear muchina, kukotama kusimudza, kunyatsoona michina yekucheka uye 260 metres roller yekugadzira yekugadzira mutsara.
Max kurodha uremu
Hot rinopfungaira chigayo
Kuramba vachikanda rinopfungaira chigayo
Cold inotenderera chigayo
Yakakwira chaiyo kutonhora kutenderera mutsetse
Nekusimbisa, nebefu mutsetse
Mutsetse wekucheka mutsara
Pashure: 1060 0.55mm aruminiyamu ubvise celling
Zvadaro: Kufungisisa Aluminium Mirror Sheet 3003 3004 3105 Alloy Yekushongedza
aruminiyamu padenga coils
kushongedza aluminium coil
maindasitiri aruminiyamu coils
High yepamusoro 1060 1100 3003 3105 5052 Pe PVDF S ...